« Opération bokiko » : miasa mafy hahavoky ny saina | NewsMada
« Opération bokiko » : miasa mafy hahavoky ny saina
Namotika fiainana sy saina ny fahantrana fa samy variana amin’ny fitadiavana izay hoarapaka ny isan-tokantrano. Na misy aza ireo liana amin’ny vaky boky, sakana ny vola, manify dia manify, eo am-pelatanana. Vokany, babangoana ny saina. Izay indrindra no nahatonga ny fikambanana « Opération bokiko » hiasa mafy, hamoky ny saina.
Tontosainy amin’ny alalan’ny fampiroboroboana ny fanoratana, famokarana ary fanaparitahana boky ; ny fanentanana amin’ny vaky boky ary ny fanatontosana famelabelarana arahina adihevitra izany. Anisan’izany ny hotanterahina ny alatsinainy sy talata izao, eny amin’ny oniversite katolika (UCM) eny Ambatoroka.
« Mpandraharaha sy mijery ny maha olona, eto Madagasikara ». Io ny lohahevitr’ity famelabelarana ity, izay handraisan’ny matihanina anjara, toa an’i Bekoto (manampahaizana mikasika ny tontolo ambanivohitra), Ratsimamanga Nirina (injeniera), Ranarivelo Roël (mpanoratra sady miasa eo amin’ny sehatra sosialy), Ravelomanantsoa Jean Marc (tale jeneralina orinasa), Rabemanantsoa Samuel (sosiology).
Anisan’ny fanontaniana tiana hovalina, mandritra ity adihevitra ity, ny hoe « orinasa toy inona no ilaina eto Madagasikara ? ». Tohanan’ny « Opération bokiko » ity tetikasa, entin’ny tanora mpianatra ao anatin’ny Ecopolis, ity satria mitarika ireo tanora handinika sy hamakafaka ary hieritreritra, izay toy ny fanomezana sakafo ho an’ny sainy.
Eo amin’ny fanitarana ny ambaindain’ny boky, marobe ireo asa efa vitan’ny « Opération bokiko », toy ny fampirantiana mitety vohitra, arahina atrikasa ho an’ny ankizy sy ny tanora, tany Toamasina sy Mahajanga.